सरकारले यस्ता तीन रोगका बिरामीलाई मासिक रु ५,००० भत्ता दिने – Sandes Post
April 1, 2022 972
बीबीसी,सरकारले गम्भिर प्रकृतिका विरामीका लागि मासिक भत्ता दिने भएको छ । सरकारले क्यान्सर, मेरुदण्ड पक्षाघात र मिर्गौलाको बिरामीलाई मासिक रु ५,००० औषधि खर्च उपलब्ध गराउने गरी मन्त्रीस्तरीय कार्यविधि तयार भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
बिरामीहरूको औषधि उपचार लामो समयसँग गर्नु पर्ने र खर्चिलो हुने हुँदा बिरामीलाई हुन जाने आर्थिक भार कम गर्न औषधि उपचार बापत खर्च उपलब्ध गराउनेू स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।स्वास्थ्य र अर्थ मन्त्रालयबीच सहमतिपछि हाल लाभग्राहीको सङ्ख्या र आवश्यक रकमबारे अध्ययन भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा। रोशन पोख्रेलले जानकारी दिए। वार्षिक दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने आकलन गरिएको छ, उनले भने।
कतिपय सरोकारवालाले यसले बिरामीलाई राहत हुने बताए पनि मेरुदण्ड पक्षाघातका बिरामीका सरोकारवालाले भने कार्यविधिमा गम्भीर त्रुटि भएको बताएका छन्।
कसले पाउँछन् औषधोपचार भत्ता ?
क्यान्सर, मेरुदण्ड पक्षाघात र मिर्गौलाका बिरामीलाई मासिक भत्ता दिइने भनिएको छ। तर त्यस्ता सबैले उक्त भत्ता पाउने छैनन्। मिर्गौला बिरामीहरूको हकमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएका वा नियमित डायलिसिस गराइरहेकाहरूलाई मात्र भत्ता पाउने छन्।
सचिव पोख्रेलका अनुसार हाल करिब ८,००० जनाले सरकारमार्फत निस्शुल्क डायलिसिस गराइरहेका छन्। त्यस्तै क्यान्सर भएका र उपचारपछि निको भएका बिरामी जो चिकित्सकको नियमित निगरानीमा छन्, उनीहरूलाई पनि सो रकम दिइने छ।
मेरुदण्ड पक्षाघात भएका व्यक्तिहरू जोसँग नीलो वा रातो अपाङ्ग परिचयपत्र छ, उनीहरूले पनि रकम पाउने छन्। गरिब परिचयपत्र वितरण भएको जिल्लाका लाभग्राहीले ूगरिब परिचयपत्रू पेस गरेर सुविधा लिन सक्छन्। परिचयपत्र वितरण नभएका जिल्लामा स्थानीय तहले सिफारिस गर्नु पर्ने पोख्रेल बताउँछन्।
कहिले र कसरी पाइन्छ ?
सरकारले तोकेको रकम स्थानीय तहले सम्बन्धित व्यक्तिको ब्याङ्क खातामा जम्मा गर्नेछ। तीन महिनाको रकम एकै पटक उपलब्ध गराइने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ। लाभग्राहीले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, नाबालकको हकमा जन्म दर्ताको प्रतिलिपि र चिकित्सकको सिफारिससहित निवेदन वडा कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने हुन्छ।
मेरुदण्ड पक्षाघात भएकाहरूले रातो वा नीलो कार्डको प्रतिलिपि पनि समाविष्ट गर्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ। चैत १३ गते स्वीकृत गरेको कार्यविधि हाल कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूमा परिपत्र गरेको छ। आवश्यक गृहकार्य गरिरहेका छौँ। सके यो वर्ष नसके आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यस कार्यक्रमलाई पठाउँछौँ, पोख्रेलले जानकारी दिए।
कसले भत्ता पाउँदैनन् ?
सरकारी र विदेशी संस्थामा कार्यरत वा त्यहाँबाट सेवानिवृत्त भई पेन्सनको सुविधा पाइरहेकाले भत्ता नपाउने बताइएको छ। ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, एकल महिला भत्ता, दलित भत्ता, पिछडिएको भत्ता र अपाङ्ग भत्तालगायत अन्य सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइरहेकाले पनि यो सुविधा पाउँदैनन्।
एक जना व्यक्तिलाई क्यान्सर, मिर्गौलाको समस्या र मेरुदण्डमध्ये दुई वा तीनै किसिमको रोग लागेको छ भने पनि मासिक रु ५,००० मात्रै पाइन्छ। रकम प्राप्त गर्ने समूहले यसअघि सरकारले दिँदै आएको सेवासुविधा पनि निरन्तर पाउने छन्। मिर्गौलाको नियमित डायलिसिस गराइरहेकाले निस्शुल्क सेवाबाट वञ्चित हुनु पर्दैन, स्वास्थ्य सचिव पोख्रेलले भने।
तर उनको भनाइ कार्यविधिमा अन्य किसिमको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइरहेकालाई यो सुविधा उपलब्ध नहुनेू बुँदासँग मेल खाँदैन। किनकि मेरुदण्ड पक्षाघात भएकाहरूलगायत अन्य रातो कार्ड भएका (क वर्गका) अपाङ्गहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्वरूप ३,९९० रुपैयाँ र नीलो कार्ड २,१२८ रुपैयाँ पाउने सुविधा थियो। अब उक्त सुविधा पाइरहेकाहरूले औषधि खर्च वा भत्तामध्ये एक मात्र पाउने बताइएको छ।
Prevपेट्रोलको मूल्य घट्यो तर ग्याँसको मुल्य भने सिलिन्डरमै २७३ रुपैयाँले बढ्यो
Nextबलिउड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीको पहिलो सन्तानको निधन , रुदै लेखिन् भावुक पोष्ट
कारागार भित्रै बाट दुर्गेश माथि खनिए पल शाह, ‘फेरी किन झुट बोल्दैछ ?’ (भिडियो सहित)
Breaking News: यस्तो सहमतीपछि पेट्रोलियम व्यवसायी भए ब्याक, आइतबारदेखि इन्धनको आपूर्ती सहज हुने (सहमतीपत्रसहित)
पल साहका फ्यानको लागि आयो दुख द खबर, उच्च अदालतले आदेश दिन १ वर्ष लाग्न सक्ने(भिडियो)